Maamulka Gobolka Bari oo soo rogay Awaamiir Culus – Geelle Magazine
Maamulka Gobolka Bari oo soo rogay Awaamiir Culus
caliahmed Posted On March 31, 2020
Kadib kulan deg deg ahaa oo ay yeesheen Xubnaha guddiga Amniga ee Gobolka Bari oo ka kooban Maamulada degmooyinka iyo Taliska Booliska ayaa waxa ay soo saareen awaamiir Culus oo ku saabsan dhinaca Amniga iyo ka hortagga Cudurka Coronavirus.
Guddoomiyaha Gobolka Bari Cabdisamad Yuusuf Maxamed (Abwaan) oo Awaamiirta saxaafadda u Akhriyey ayaa sheegay in dhammaan heegan la geliyey Ciidamada ku sugan Gobolka Bari iyo in dhamaan Shaqaalaha ka howlgalla Gobolka Bari ay Shaqadooda xadidaan lana Shaqeeyaan Ciidamada.
Sidoo kale waxa uu sheegay in laga bilaabo 1-da Bisha April in la joojiyey Basaska ka dhex shaqeeya Magaalada Boosaaso iyo Guud ahaan degmooyinka kale ee Gobolka Bari muddo 15 cisho ah, si looga hortago Cudurka saf-marka ah ee Coronavirus.
“Laga bilaabo 1-da April waxaa la joojiyay basaskii ka dhex shaqeyn jiray magaalooyinka Puntland oo dhan, sidaa daraadeed waxaynu faraynaa magaalooyinka Gobolka Bari ee waa weyn ee basasku ka dhex shaqeeyaan gaar ahaan magaalada Caasimadda ah ee Boosaaso in la joojiyay basaskii ka dhex shaqeyn jiray 1-da April, ayna ku talagalaan xiligaas laga bilaabo ilaa 15-ka April bas ka dhex shaqeyn kara magaalada dhexdeeda ma jiro”. Ayuu yiri Guddoomiyaha Gobolka Bari.
Qodobka ugu muhiimsan ee kulankaasi kasoo baxay ayaa waxaa ka mid ah in laga bilaabo 1-da Bisha April Magalada Boosaaso iyo guud ahaan Gobolka Bari laga dhigay bandow Habeenkii ah oo bilaabaneysa 6:00 Habeenimo kuna eg 5:00 Subaxnimo.
“Laga bilaabo 1-da April 6:00 maqribnimo maalinnimadaa laga bilaabo waxaa lagu soo rogay magaalooyinka waa weyn bandow, bilaaban doona 6:00 maqribnimo ilaa iyo 5:00 Subaxnimo”. Ayuu sidoo kale yiri Guddoomiye Cabdisamad Yuusuf Maxamed.
Shirkadaha Diyaaradaha ee Mareykanka oo dalbaday $12 bilyan oo gargaar dowladeed ah